कपाल काटेरै लखपति बने पिन्टू ! Bizshala -
धरान । वर्षेनी ५ लाख श्रम भित्रिने नेपाली अर्थतन्त्रमा दैनिक १५०० विदेशिनु नेपालका लागि विडम्बना नै हो । काम सानो वा ठूलो हुँदैन भन्ने भावना राखी सच्चा मनले कामप्रति दृढ हुने हो भने आफ्नै गाउँठाउँमा मासिक लाखौं कमाउन सकिन्छ । हामीसँग यसको अनेकन उदाहरण छन्, तिनैमध्येका एक हुन् सत्यम ठाकुर(पिन्टू) ।
स्थायी घर भारत भए पनि सुन्दर नगरी धरानमा जन्म भई पिता छोटे ठाकुर र माता मीना ठाकुरको कोखबाट जन्म लिई १० कक्षा धरानकै निकेतन उ.मा.वि.बाट अध्ययन गरेका सत्यम ठाकुर उर्फ पिन्टुले कपाल काटेरै मासिक १ लाख बढी कमाउने गरेका छन् ।
केही हजारका लागि अरबको ताता मरुभूमिमा काम गर्न जानुभन्दा स्वदेशमै केही सीप सिकेर उद्यमी बन्न सके यही शानको जिन्दगी बाँच्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण समेत हुन् पिन्टू ।
आफ्नै भिनाजुको सैलुनमा कपाल काट्न सुरु गरेका पिन्टुले १ वर्षपछि धरान ११ मंगलबारेमा प्रमोद ठाकुरको सैलुनमा स्टाफ भई काम गरे । ६ महिनापछि आफैले कमाएर जम्मा पारेको ६० हजारमा उक्त सैलुन खरिद गरी मालिक बने, त्यसपछि उनले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेन ।
कपाल काटेको, दाह्री काटेको र फेसियल गरेको क्रमशः रु.८०, ६० र ७०० लिने उनी ती लगायत डेढदर्जन सेवाहरु आफ्नो सैलुनबाट दिने गरेको बताउँछन् ।
परिवारका कान्छा छोरा उनले प्यारालाइसिसका बिरामी पिताका लागि मासिक २० हजार दबाई खर्च पनि धानेका छन् । उनले आफ्नै सैलुनमा अर्का एक व्यक्तिलाई रोजगारी पनि दिइरहेका छन् । नेपाली नागरिकता लिने प्रयासमा रहेका पिन्टुले त्यसैको अभावमा सहकारीमा पैसा बचत गर्ने गरेको बताउँछन् ।
ऋणदेखि डराउने उनी सहकारीले ५ लाख ऋण दिन खोज्दा लिन मानेनन् । शेयर बजार बुझ्ने गरेका पिन्टुले कारोबार नगरे पनि इच्छा रहेको र निकट भविष्यमा लगानी गर्ने योजना सुनाए ।
बाबालाई दबाईको खर्च गरेर पनि भारतमा १ तल्ले पक्की घर निर्माण गरेका उनले अब नागरिकता पाए नेपालमै पनि घर बनाउने र व्यवसाय अझ राम्रो गर्दै लैजाने सपना रहेको हामीलाई सुनाए ।
बाआमाको पैसा उडाउन नहुने, आफ्नो खुट्टामा उभिनु युवाहरुलाई उनको सुझाव छ ।
हँसिला, मिजासिला र मिलनसार मनले खाएका व्यक्तिहरुलाई चीसोतातोले आतिथ्य दिन समेत उनी पछि पर्दैनन् ।
दुःखै दुःखको जीवन श्रम गरेर सफल भइने र परिवारसँग सँगै मिलेर खुशी बाँड्न पाए जीवन सफल हुने उनको धारणा छ ।
घरको आर्थिक अवस्था कमजोरी भएका कारण चौध वर्षअघि सानै उमेरबाटै काम गर्न बाध्य उनी बुवाको रक्सी अम्मलीले घरमा खानेकुराको जोगाडका लागि पनि दुखको सागरमा होमिन पुगे ।
त्यही दुखको रापले चेतना दिई संघर्षको जंघार तर्दै आज सफल उद्यमी पनि बने ।
राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय जस्तोसुकै स्टाइल कपाल काट्न माहिर पिन्टू सोसल मिडियामा चाहि फेसबुक र युट्युबको सदुपयोग गर्दै कपाल काट्ने शिक्षा लिने गरेको बताउँछन् ।
औधी गर्मी कसरी भगाउने ? आविष्कार भो कुलिङ बेड
काठमाण्डौ । गर्मीको मौसम सुरु भइसकेको छ । नेपालकै कतिपय औधी गर्मी...
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । सुदूरपूर्वकै रमणीय र फेसनेबल सहरको...
दैनिक यी ६ कामका लागि समय निस्किएन भने अधूरै रहनेछ तपाईको धनी
काठमाण्डौ । सफलता रातारात त्यसै प्राप्त हुँदैन । यसका लागि आफ्नो...
-अफजल हुसेन यो संसारमा तीन थरिका मनसाय भएका मान्छेहरु बस्छन् र...
डेढवर्षमै कसरी लोकप्रिय भो मिराज बेकरी ?एक युवाको रोचक सक्सेस
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । ढुंगाको काँपमा पिपल उम्रिने मुलुक हो...
पुरुष गार्ड सप्लाई गर्दै जो मासिक एकलाख बढी कमाउँछिन् !
काठमाण्डौ । गर्न चाहनेका लागि नेपालमै जताततै संभावना छ । मेहेनती र...
हङ्गेरीका प्रधानमन्त्रीले चार वा सोभन्दा बढी बच्चा पाउने...
-अफजल हुसेन देश विकसित हुनका लागि आफू विकसित हुन अति आवश्यक छ । आफू...